ikhaya AMAZIKO E-ASIAN FOOTBALL Ibali le-Fyodor Smolov yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Julayi 23, 2018
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGrisi yebhola yaseRussia eyaziwa kakhulu ngegama lomnxeba; "UFedor". Ibali lethu le-Fyodor Smolov yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye neeninzi ezininzi ze-OFF-pitch (pit little known) ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba uFyodor ufumene iinjongo ezininzi kumsebenzi wakhe. Nangona kunjalo, nje kuphela abalandeli abambalwa abaziwayo malunga neFyodor Smolov's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Fyodor Smolov Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UFyodor Mikhaylovich Smolov wazalwa ngosuku lwe-9th kaFebruwari 1990 kunina, u-Irina Smolova kunye noyise, uMikhail Smolov eSaratov, eRussia-ntshona yeRashiya. Wazalelwa yindodana yedwa kunye nomntwana wamalungelo akhe abenzi bokuzimela.
Njengomntwana, intsapho kaFyodor yayihlala kwindawo esecaleni lolwaphulo-mthetho yaseRussia yaseSaratov ngaphandle kwedolophu. Oku kwenza abazali bakhe babe neendlela ezininzi zokukhusela unyana wabo kwimpembelelo embi yabafana. Ngomnye ukugwema unyana wakhe edibanisa nabahlobo ababi, uyise uMikhail wathatha uFyodor kwiklabhu yebhola yebhola yasekhaya, uSokol ukubhalisa. Ngelishwa, uFyodor Smolov wayengowomdlali wecandelo lakhe lebhola lebhola ekhatywayo (Sokol Saratov) apho uyise wayethathe khona ukuba aqale umsebenzi wakhe wobutsha. Intliziyo yakhe yayinayo "Lokomotiv Moscow" e-Russia inkunzi. Le yilapho ephupha khona ngokuqala umsebenzi wakhe.
Wayephupha ukuba ilungu leqela leqela. Ekubeni azi ukuba akukho mithombo yemali yokwenza oko kwenzeke, uFyodor Smolov waqhubeka kunye neklabhu awazange ayixhase. Isigqibo sikayise sasinefuthe elibi kwimpumelelo yakhe yenkcubeko.
UFyodor Smolov wayehlala ezama ukujamelana nebhola lebhola. Wade wehluleka ukuhlolwa kwakhe kwebhola kwi-14. Yayixesha lokuba uyise aqale ukuva ukuba umntwana wakhe omncinci wayebophekile kwaye wayephelelwe ngumdlalo. Uyise wabe esenxininisa ukuba unyana wakhe athathe uviwo lokugqibela lwebhola lelo xesha, ukusuka kwelinye iqela. UMikhail waphetha ngelithi unyana wakhe wayeyayeka ibhola xa engaphumelelanga kuviwo lwesine oluzayo.
Ngethamsanqa, uFyodor wadlulisela uviwo kwiqela elitsha lebhola lebhola leScott Saturn esuka eYorkyevsk, kwingingqi yaseMoscow. Bavuya ngokuvakalayo kumfana omthembisayo kwaye uFyodor waqhubeka nokuqonda izakhono zakhe kwimidlalo ayithandayo. Ekugqibeleni wagqiba umsebenzi wakhe wobutsha eSaturn Moscow apho wadlala phakathi kwe-2006 kwi-2007.
Ku-16, uFyodor Smolov wasayina isivumelwano sokuqala sobugcisa kunye neDinamo Moscow. Ngeli xesha, waba ngumntu ozimisele ukuzimisela ukuba amaphupha akhe afezeke kwaye iinjongo zakhe zokuba umatshini wokukora wawungeyona nje idlulayo. Ukufikelela kwimbali yakhe yomsebenzi, tUphumla, njengoko besithi, ngoku iimbali.
I-Fyodor Smolov Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ngaphambi kwamadoda onke amakhulu, kukho umfazi omkhulu, okanye oko kuthetha. Kwaye phantse yonke i-footballer ephumelelayo yaseRashiya, kukho umfazi othakazelisayo, u-wag okanye intombi. Ngaphandle kokungathandabuzeki, ubuchule beFyodor obukhuselayo, kunye nendlela yakhe yokuphila ngaphandle kwesiqalo sakhela umfanekiso opheleleyo.
Kwi-2012, wadibana neRussia kunye nomncedisi weTV, uVictoria Lopyreva kwiqela lakhe lokuzalwa (u-Yuri Zhirkov). Ukuqwalasela ubuhle bakhe, kubalulekile ukuchaza ukuba uVictoria wayephumelele kwi-Miss Russia 2003.
Enye ingongoma ebalulekileyo ukuba uqaphele kukuba; UVictoria Lopyreva uneminyaka engama-7 emdala kunendoda yakhe. Noko ke, le nto ayizange ithintele ulwalamano lwabo olunzulu ekuphuhliseni kwaye kubaluleke ngakumbi, isiluleko somtshato esenzeka kwindawo ekhethekileyo [akukho-ring] isitayile. NgoDisemba wama-2013, ii-lovebirds; U-Lopyreva noFyodor babenomtshato omnandi nonothando kwiiMaldives. Umtshato wabo uhlala kuphela iminyaka emibini ngaphambi kokuba bahlukane. Omabini la maqela ayeka ukunxibelelana ngoJulayi ngo-2016.
Isizathu esicacileyo sokuqhawula umtshato sinezantsi apha kwi-Fyodor Smolov Family Facts njengoko kuchazwe ngumama kaFyodor. I-media yaseRussia, nangona kunjalo, yabika ukuba uqhawulo mtshato wafika njengoko uFyodor Smolov wayevakaliswa ukuba abone uMiranda Shelia, omnye umzekelo waseRashiya ongezantsi.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba uMiranda (okuchazwe ngasentla) udla ngokuthelekiswa Irina Shayk, Omnye umzekelo omhle owayeqhelekile Cristiano Ronaldo 'mthandi. Emva kokusebenza kakubi kweRashiya kwi-2016 UEFA Championship yaseYurophu, uFyodor waphula nentombi yakhe uMilanda Shelia.
Kwakhona, ekuwa kwe2016, imidiya yaseRashiya yabika ukuba uthando lwaqala ukutshata noSofia Nikitchuk owayengumdlali we-2015 Miss Russia.
I-Fyodor Smolov Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Ulwazi lweentsapho
Umama: U-Irina Smolova ochazwe ngezantsi kunye nendodana yakhe ethandekayo ngumama kaFyodor.
Umama kaFredor Smolov waqala ukuthetha ngokumtshato nomyeni wakhe ngomzekelo kunye nombonisi weTV uVictoria Lopyreva. Wavuma ukuba intliziyo yonyana wakhe yaphulwa ngumfazi owawuthatha ixesha elide ekunyamekeleni umsebenzi wakhe, kungekhona umyeni wakhe kunye neemfuno zakhe.
U-Irina waphawula ukuba bobabini umdlali kunye nomzekelo baye bafumana ukuhlukana okubuhlungu. Yena noVictoria babe nobuhlobo obufudumele kakhulu, kwaye umntakwabo owayengumntakwabo wamthiya umama. Ngamazwi akhe ...
"Kwiminyaka emithathu ababehlala kunye ngayo, ndakhele ubudlelwane obuhle naye, kwakuchukumisa kwaye kuthoba, xa wambiza uMama. UVika kunye nathi sithetha ngendlela eqhelekileyo ngoku ".
"Andikwazi ukuthetha, kunjalo, kodwa mhlawumbi abazange bakwazi ukugcina ubudlelwane babo. Kuba iFyodor yayinzima ngokwaneleyo: Ndicinga ukuba, yamthanda. Mhlawumbi ngexesha elithile, umgama wudlala indima engalunganga.
Xa uFyodor uqeqeshwa kwinkampu yoqeqesho, iVictoria ixakekile ukwenza umsebenzi - ungumbukeli weTV kunye nomzekelo wemodeli, uphumelele, kwaye ufuna umsebenzi omkhulu ufuna umzamo omkhulu. Endaweni ethile, kuvela, kwakungabikho kwexesha leFyodor. Ungumntu othanda induduzo yasekhaya, ingqalelo. Mhlawumbi yingako intombazana enquma ukuba nayo, imele ifanelane naye ".
U-Irina Smolova (unina kaFyodor Smolov).
I-Fyodor Smolov Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Iinkcukacha zobomi bomntu
UFyodor Smolov uthanda amathambo. Umdlali wezemidlalo wayenothambo lwakhe lokuqala kwi-17 kwaye ngoku, akakwazi ukuthetha ukuba unobumba obunjani. Zonke iidotto zakhe ngoku zifakela kwaye zenze umzekelo omnye wesithombe njengoko kuboniswe kwisithomi esingezantsi.
Uxhasa i-AC Milan ukususela kwixesha le-1997 / 98 kwaye sele likhankanywe George Weah kwaye Andriy Shevchenko njengabadlali abathandayo abantwana.
Ubuthathaka bukaFyodor: Ugijima kwintetho yomzwelo. Ngaphezu koko, unokuba nomoya ongenakwizinto, ongahambelani kwaye engenobungane.
Yintoni iFyodor engayithandiyo: Akayithandi izithembiso ezityhukileyo, ukuba yedwa, iindawo ezintle okanye ezithandekayo, abantu abangavumelani naye.
Uloyiko olukhulu lukaFyodor lubona lukhawulezileyo okanye lukhuni. Oku kubangela ukuba kubanda kwaye kungabi nako. Nangona kunjalo, unendlela yokuzivikela ekuchaseni kwangaphambili. I-Fyodor kufuneka ifunde indlela yokuthembela ngamantombazana, kwakhona ukuveza iimvakalelo zakhe ngendlela ephilileyo.
Umdlali webhola lebhola naye uthanda ukufunda iireveli ukusuka kwiintsuku zakhe zobuntwana njengoko kuchazwe ngezantsi.
Abaphenyi bobugebengu i-la Mario Puzo kunye no-Arturo Pérez-Reverte, iincwadi zeencwadi zikaFyodor Dostoevsky, kunye neemisebenzi zikaMikhail Bulgakov ziincwadi zakhe ezithandayo.
I-Fyodor Smolov Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Andivuyo ngee-Big Clubs zaseYurophu
Kwilizwi elibuhlungu, uFyodor Smolov uye watshela uMaxim Online ukuba iiklabhu zangaphandle zivakalelwa ukungafuni ukusayina abadlali baseRashiya. Ngamazwi akhe ...
Amacandelo e-Champions League asemacaleni awayi kuphuma ekungeniseni. Ndazibona ngexesha lokutshintsha kwewindow. Ndinezibonelelo ezithile, kodwa zizonke iimali-mboleko ezinegunya lokuthenga. Iiklasi ezinkulu zaseYurophu zisibheka njengento eqhelekileyo kunye ne-introverted.
I-Smolov yongezwa kukho inkolelo ethile eYurophu xa kuthethwa ngabadlali baseRashiya.
QHUBEKA: Siyabulela ngokufunda iindaba zeFyodor Smolov yabantwana kunye neenkcukacha ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
Umhla oLungisiweyo: nge-1 kaDisemba ngo-2019
I-Ryo Miyaichi Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts